Izithombe zobulili ezingcolile kanye nezidakamizwa zocansi | I-Foundation Foundation
Ikhaya Inkampani Izithombe zobulili ezingcolile kanye nezidakamizwa zocansi
I-TRF inikeza ama-Workshops avunyelwe i-RCGP
Uma ufuna ukufunda kabanzi ngomthelela wezithombe zocansi ze-intanethi kanye nokungasebenzi kahle kwezocansi, yiza kumasifundisane wethu wegama elifanayo. Kuvunyelwe yiRoyal College of General Practitioners. Iworkshop ibiza izikweletu ze-7 ze-CPD ze-workshop yosuku lonke nezikweletu ze-4 zenguqulo yezinsuku ezinhlanu. Itholakala e-UK naseRepublic of Ireland. Ngiyacela contact nathi uma ufisa ukuzwa okuningi ngama-workshops azayo noma ukuhlela umcimbi endaweni yangakini. Manje sesilethe lokhu kuqeqeshwa ezikhathini ezingaphezu kwama-20.
Ukulethwa kwale workshop kumisiwe naphambi kwesifo seCovid.
Ukusetshenziswa ngokweqile kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kusiza ngokushesha njengesifo sokucindezeleka sokuziphatha ngokocansi. Lokhu kufana nokusetshenziswa okukhulu kwama-Smartphones nokufinyelela okulula kokusakazwa kwevidiyo eminyakeni eyedlule ye-10. Kunezinkinga eziningi zempilo yengqondo nezomzimba eziye zavela. Isibonelo, ukwanda okukhulu kwe-erectile ukungasebenzi kwamadoda amancane, ubufakazi obubanzi bokugculiswa ngokocansi kwabantu abesilisa nabesifazane, nokukhathazeka okungokwenhlalo nakwezinye izifo ezinganeni zonke kubonakala sengathi kuhlobene nalesi simo semvelo.
Ochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo kumele babazi ubufakazi obusekela imodeli yokulutha. Manje kunezinketho zokwelashwa ezisebenzayo nezindlela zokwelapha ezithuthukisa ukululama kufaka phakathi ukunikezwa ngempumelelo komphakathi.
Lo msebenzi wokuxoxisana uzonikeza isingeniso sokulutha kwe-neuroscience ejwayelekile kanye nokusetshenziswa kwezithombe zocansi kwe-inthanethi ikakhulukazi, kususelwa ocwaningweni lwakamuva. Sizobheka izinhlobo ezahlukahlukene zempilo yomzimba kanye nezempilo yengqondo ezihlobene nokusetshenziswa kwe-porn okuvela ocwaningweni. Sizokhuthaza izingxoxo ezikhanyayo phakathi kwabasebenza ngokusebenza okuhle kakhulu, ukuthuthuka okungenzeka, kanye nezinketho zokutakula uphawu.
Umsebenzi wosuku ogcwele wezithombe zocansi kanye nezinkinga zocansi
Okwamanje asinawo ama-workshops osuku lonke ahlelelwe ngenxa yobhadane lweCoronavirus, kodwa sivulekele iziphakamiso zokuthi ungathanda ukuba nini futhi kuphi.
I-09.00 - Isingeniso sezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi, Isivivinyo Esikhulu Sokuzijabulisa, incazelo ye-World Health Organisation yezempilo yezocansi, i-ICD-11 kanye nokuphazamiseka kokuziphatha ngokocansi okuphoqelekile, amamodeli okulutha kanye namamodeli wobuchopho, izindlela zokuziphatha komsebenzisi nokukhuphuka kwempahla eqinile
10.30 - Ikhefu
10.45 - Ukusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile nezingozi - imiphumela yezempilo engokwengqondo nengokomzimba, kufaka phakathi ukungasebenzi kahle kwezocansi kwabasakhulayo, abesilisa nabesifazane. Izingxoxo zamaqembu amancane, zibuza amaklayenti ngokusetshenziswa kwazo kwezithombe zocansi, bese kuba nengxoxo yeqembu lonke. Amaphethini wokusebenzisa intsha, isimo sezocansi, ukushintsha amaphethini wokuziphatha ngocansi emphakathini wonke, izingqinamba zezempilo yengqondo, ukuhlukunyezwa ngokocansi kwengane nengane, ukungasebenzi kahle kwezocansi okubangelwa ucansi kanye nendima yezithombe zocansi ebudloveni basekhaya. Isikhathi se-Q & A.
13.00 - Isidlo sasemini
14.00 - Ukusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile nezinkinga zokwehlukahlukana kwezocansi, ukuvivinya izinkinga zabasebenzisi nokunikeza izinsiza zokuxhasa ukuqina. Izithombe zobulili ezingcolile njengezinkinga zokuphila emiphakathini ye-LGBTQI + ne-MSM, ama-comorbidities, i-chemsex, izinketho zokwelashwa, i-Problematic Pornography Use Scale, imiphakathi yokubuyiselwa kwe-inthanethi nokuyalelwa kwezenhlalo. Izingxoxo zamaqembu.
15.15 - Ikhefu
15.30 - Ukubuyisela esimweni nokuvikela - Zingakanani izithombe zocansi ezingaphezulu kakhulu? Ukwelashwa kanye nezinketho zemfundo, ukuluthwa, ukuhoxa, 'ukucaba', ukucabanga, i-CBT kanye nokwelashwa kwezidakamizwa. Siphetha ngokwakha ukuqonda kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ekusebenzeni kwakho komtholampilo.
16.20 - Ukuhlola nokuvala.
UMary Sharpe ungumsunguli kanye neChief Executive Officer yenhlangano yezemfundo esiza abantulayo Isisekelo Somvuzo - Ezothando, Ezocansi kanye ne-Intanethi. Ubelokhu ethula imiphumela emayelana nezithombe zocansi ze-Intanethi kochwepheshe kwezokunakekelwa kwempilo, ubulungiswa kwezobulungiswa kanye nemfundo nasezikoleni eminyakeni eyi-5 edlule. UMary wayeyilungu leBhodi leNhlangano leNtuthuko Yezempilo yezocansi e-USA ukusuka e-2016 kuya kwi-2019.
UMary wayezinze eNyuvesi yaseCambridge iminyaka eyishumi. Lapho wenza ucwaningo ngohlelo lweNATO Science for Peace and Security. Wayengumbhali wezesayensi weCambridge-MIT Institute. Lona kwakuwumsebenzi ayekade ewenza e-European Commission eBrussels. Ubuye wafundisa abafundi nabasebenzi ekuqiniseni ukusebenza okuphezulu ngamasifundisane ngamakhono empilo kanye nokuphathwa kwengcindezi. ngo-2020 uMary wabuyela eNyuvesi yaseCambridge njengeScholar Visiting eLucy Cavendish College. UMary wenza umthetho njengommeli kanye noMmeli iminyaka engaphezu kwengu-15. Ushicilele ezicini eziningi zezempilo, ezocansi nezomthetho futhi wakhuluma ezingqungqutheleni emhlabeni wonke. Ujabulela ukufundiswa ubuso nobuso nezingxoxo. I-biography enemininingwane eminingi kaMariya iyatholakala lapha.
UDarryl Mead I-PhD ingcweti nomcwaningi we-inthanethi embonini yezithombe zocansi. Endimeni yakhe njengoSihlalo weThe Reward Foundation ugxila kumthelela wokusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile ekuziphatheni kwentsha nakubantu abadala. UDarryl wenza izimpendulo zenqubomgomo ezintsha ezinseleleni zezempilo ezidalwe ukwamukelwa okubanzi kokubuka izithombe zocansi njengesimo sokuzijabulisa kwabantu abaningi. Njengesikhulu esiphezulu eNational Library yaseScotland, uDarryl wasiza ekusunguleni uhlelo olusetshenziswa yi-UK ukugcina i-inthanethi. Njengothisha oqeqeshiwe, wayephethe izindima zangaphambilini njengomxhumanisi wesayensi futhi uyiChartered Information Professional (FCLIP).
Imibuzo? Eminye imibuzo? Sicela uthinte i-Reward Foundation nge-imeyili: info@rewardfoundation.org noma iselula: 07506475204.